အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ရင် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု မရှိနိုင်
၂၀၀၈ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေကို မပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိန္ဒိယရောက် မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မဲရုံတစ်ရုံကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က အပြီးသတ် ပြင်ဆင်နေ စဉ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ရှိ Oxford Senior School ကျောင်းမှာ ဒီနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။
"မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကယ်ပဲ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရောက်ပြီလား၊ မရောက်ဘူးလားဆိုတာ အဖြေသိချင်လု့ိရှိရင် ဒီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဖို့ဆန္ဒ တကယ်ရှိသလား၊ မရှိဘူးသလားဆိုတာကို ကျမတို့ လေ့လာရမှာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘဲနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်ပြီးတော့ တရားမျှတတယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ရင်တော့ လွတ်လပ်မယ်၊ တရားမျှတမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ပြောရခြင်းအကြောင်းက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကကိုက တရားမမျှတတဲ့အခြေအနေတခုကို ဖန်တီးထားလု့ိပါ။ ဒီတော့ အကြံပြုချက်အတိုင်းပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပြင်ပရော၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာကောရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အစုအဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဦးတည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရမယ်၊ လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာ ကျမ လုံး၀ သဘောတူပါတယ်"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားရမယ်လို့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
"ကျမတို့ တကမ္ဘာလုံးမှာ ရောက်နေတဲ့၊ မြန်မာပြည်က ထွက်လာတဲ့ ကျမတို့ မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဟာ အချိန်မရွေး ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ့်ရဲ့ အမိနိုင်ငံကို ကိုယ့်ရဲ့ အဖနိုင်ငံကို လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ ပြန်ချင်တဲ့အခါ ပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်အောင်လို့ ကျမတို့ ကြိုးစားပြီးတော့ လုပ်သွားပါမယ်"
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ ရှေ့လျှောက် အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ အဲဒီ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲကို နယူးဒေလီမြို့ရောက် မြန်မာဒုက္ခသည် ၁၀၀၀ နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အိန္ဒိယခရီးစဉ် စတုတ္ထနေ့မှာ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံခင် သူ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ Lady Shari Ram Collage (လေဒီရှရီယမ်) ကောလိပ်ကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့သလို သူ့ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Prospect Burma ကျောင်းကို လည်းသွားရောက်ပြီး ကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မဖြစ်နိုင်သေးပါ နဂိုတညးကရှေ့မရောက်သေးပါ ဟထားပေးတဲ့အချိန်နဲနဲ လေးကို အဟုတ်ထင်ရင်မှားသွားမှာပေါ့ ထမင်းစားတတ်ရင်စဉ်းစားတတ်မှာပါ
Dec 04, 2012 07:08 AM
အစိုးရက တကယ်ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းသင့်တဲ့ အချိန်ကောင်းပါ။ သူတို့က နောက်ကြောင်းပြန်ချင်နေတော့ အစစ ကြာနေတာပေါ့။
Nov 27, 2012 05:03 AM
ALL students SHS2Dagon
Bangali(so-called Rohingya) Muslims are killing many Buddhists in Myanmar. They burnt Buddhist monestaries. Besides that please save the Arakanese(Rakhinese). They are real ethnic in Arakan(Rakhine) state in Myanmar. But Bangali are not ethnic in Arakan. They are real Bangali (Bangladesh). They do not have ID cards, passports and they illegally come from Bangladesh to Myanmar every years. They cooperate﻿ with Tarliban, Al-Quator and some Muslims insurgent organization of all over the world.
1. Hence, we want to see all illgal migrants Rohingya people (no birth certificate, no family pedigree) in Rakhine DEPORT to their home country (Bangladesh) as soon as possible under﻿ UNHCR Refugee program.
2. Rohingya must go back their home country according to our Burma citizenship law 1982 (or) OIC member countries must pick up Rohingyas.
အမေကတော့ ဂျာအေးကို ရိုက်အုံးမလို့ စောင့်နေပြန်ပါရော့။
Nov 17, 2012 02:01 AM
Well said DASSK and noted." Constitution itself has created an unjust situation "
Similarly, 1982 citizen law itself has created an unjust situation for Rohingya to become citizen. As all knowledgeable people of this world know Rohingya have been living in northern Arakan forafew centuries and only because the 1982 citizen law did not recognise Rohingya asacitizen group of Burma and the Rohingya become illegal immigrants. Even Burmese Govt broadcast Rohingya language programme from 1961 to 1965 from BBC. Today majority of Burmese are telling that they never heard of Rohingya. Is that will hold any water?
Nov 16, 2012 09:04 PM